eSancharpati | ज्योतिष विज्ञानका अनुसार बिहानै उठेर यस्ता कार्य गर्नुहोस ! - eSancharpati ज्योतिष विज्ञानका अनुसार बिहानै उठेर यस्ता कार्य गर्नुहोस ! - eSancharpati
ज्योतिष विज्ञानका अनुसार बिहानै उठेर यस्ता कार्य गर्नुहोस !
१३ श्रावण २०७८, बुधबार ०६:३६
तपाई बिहान उठेर केके गर्नुहुन्छ ? यस्ता कामहरु गर्नुभएको छैन भने अब देखि बिहान बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् । तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन । भाग्य चम्किने छ । घरमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी नै धेरै परम्पराहरु मान्दै आएको पाइन्छ ।
तर आजकालको आधुनिक युगमा धेरै मानिसहरुले पुराना परम्पराहरु मान्न छाडिसके । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार मानिसहरुले त्यस्ता पुराना परम्पराहरुको ध्यान आज पनि राखेमा त्यसबाट सकरात्म कफलहरु पाइन्छन । बिहान सबेरै यस्ता परम्परागत काम गर्नाले घरमा लक्ष्मीको साथमा अन्य सबै देवीदेवताहरुको कृपा पाइन्छ ।
तर आजकालको आधुनिक युगमा धेरै मानिसहरुले पुराना परम्पराहरु मान्न छाडिसके । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार मानिसहरुले त्यस्ता पुराना परम्पराहरुको ध्यान आज पनि राखेमा त्यसबाट सकरात्म कफलहरु पाइन्छन ।बिहान सबेरै यस्ता परम्परागत काम गर्नाले घरमा लक्ष्मीको साथमा अन्य सबै देवीदेवताहरुको कृपा पाइन्छ ।
सुर्यलाई जल चढाउनुहोस्ः
#ज्योतिष विज्ञान #बिहानै उठेर यस्ता कार्य गर्नुहोस